Momba anay-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd.
INONA NO ANAO
Amin'ny maha mpikaroka matihanina, mpanamboatra sy saler azy, Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Limited Corporation dia iray amin'ireo mpanamboatra lohan-doha fehikibo any Sina. Mavitrika amin'ny sehatry ny famokarana vokatra fiarovana ny maso amin'ny fizotran'ny welding izahay, ao anatin'izany ny solomaso famaohana, ny fiarovan-doha alokaloka, ny rivotra mifono rivotra manadio ary ny fittings
Miaraka amin'ny fikarohana siantifika mandroso, famokarana ary fanandramana fitaovana, ny orinasanay dia iray amin'ireo orinasa lehibe mandinika sy mamokatra vokatra mifandraika eto amin'ny firenentsika. Izahay dia manizingizina ny fanavaozana ny siansa sy ny teknolojia ary ny fikarohana sy ny fampandrosoana tsy miankina. 20% ny mpiasa ao amin'ny orinasanay dia teknisiana, ekipa teknika tokony hireharehana. Tonga hatrany amin'ny sehatra avo lenta ny vokatray.
Ny orinasanay dia mikendry ny fanavaozana mitohy sy ny fiaraha-miasa mandresy fandresena amin'ny mpanjifa. Izahay dia tokony hanome vokatra sy serivisy ambony indrindra amin'ny fahatsorana sy hafanam-po lehibe indrindra.
MX-9 Auto Darkening Welding Helmet misy tselatra
Ny fahatokisanao no hery lehibe indrindra mampivoatra antsika, azafady matoky anay 100 isan-jato.
Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd., miorina ao Nantong City, faritanin'i Jiangsu, dia orinasa ara-tsiansa-teknolojia iray, izay manampahaizana manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana vokatra elektronika. Vokatra lehibe: saron-koditra mihamainty ny fiara, fitaovana, shunts, welder stud ary ny fittings sns.
Voatendry tamin'ny 2012
Vitsy noho ny olona 5
0% tahan'ny valiny haingana
3000 - 5000 metatra toradroa